पूर्वएआईजीको अनुभव- चुनावमा कसैलाई जिताउन र हराउन कसरी हुन्छ प्रहरीको दुरुपयोग ? – Nepal Press
२०७९ वैशाख १६ गते ११:२८
आफ्नै अनुभवबाट सुरु गरौँ । म त्यतिबेला डीएसपी थिएँ । दरबन्दी थियो पुलिस एकेडेमीमा । तत्कालीन आईजीपीले संवेदनशील जिल्ला रहेकाले थप मद्दतका लागि जाउ भन्दै नवलपरासी पठाउनु भयो । म त्यहाँ पुगेपछि नवलपरासीका तत्कालीन एसपीले तिमी जिल्लाको सबै हेर भन्नुभयो ।
आईजीपीबाट भर्खरै बिदा भएका ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल चुनावी मैदानमा थिए । तराईमा चुनावको केही दिन पहिलादेखि साडी, पैसाहरु बाँड्ने गरिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । प्रधान समूहले साडी बाँडिरहेको सूचना आएपछि हामीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका थियौं । नभन्दै साडी बाँड्नेहरु पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि प्रधान समूहबाट पनि सूचना आयो–कँडेलको समूहले पनि साडी बाँडिरहेको छ । नभन्दै त्यस्ता गतिविधि गरिरहेको समूहका केही व्यक्ति पक्राउ परे । तर अब फसाद पर्‍यो ।
प्रधान समूहका मान्छे पो पक्राउ गर्नु भनेको, कहाँ कँडेल समूहका मान्छेलाई पक्राउ गरेको ? भनेर एसपी साबले नै भन्नुभयो । उहाँलाई माथिबाटै त्यस्तो निर्देशन रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । तर म मान्ने खालको थिइनँ । भोलिपल्टै हृदयेश त्रिपाठीको क्षेत्रमा मलाई पठाइयो । त्यहाँ चौधरी थरका एक जना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने माथिबाटै निर्देशन रहेछ । एक–दुई हजारको मत तल–माथि हुँदा हृदयेश त्रिपाठीले जित्ने सम्भावना थियो । म बेलटारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेको थिएँ ।
तीनवटा गाविसमा हृदयेश त्रिपाठीको बलियो पकड रहेछ । त्यहाँका ९५ प्रतिशत मतदाता उनको पक्षका रहेछन् । मतदानको अघिल्लो दिन साँझ ती गाविसमा प्रहरीहरु समेतलाई बन्धक बनाइएको सूचना आयो । म गाडी लिएर त्यहाँ पुगें । नभन्दै सादा पोशाकका दुई जना असई, एक जना हबल्दारसहित केही भारतीय गुण्डाहरु गाडीमा रहेछन् र उनीहरुलाई गाउँलेले घेरा हालेर बसेका रहेछन् ।
भारतीय गुण्डाहरुले गाउँलेलाई भोलिको निर्वाचनमा मतदान गर्न गए यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर थर्काइरहेका थिए । मैले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर थुनेँ । यसबारे माथि रिपोर्ट पनि गरिनँ । त्रिपाठीजीले ५ सय मत अन्तरले चुनाव जिते । उनी पछिसम्म भनिरहन्थे– त्यो दिन तपाई आएर उनीहरुलाई पक्राउ नगरेको भए म चुनाव हार्थेँ होला ।
पञ्चायतकालमा पनि म चुनावमा खटिएको थिएँ । विराटनगरमा एकजना चर्चित व्यक्ति मेयरमा उठेका थिए । उनलाई हराउन दरबार नै लागिपरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पनि त्यस्तै निर्देशन रहेछ । पछि मैले थाहा पाएँ– मतदान सकेर मतपेटिका लैजाने क्रममा प्रहरीले मतपेटिका नै परिवर्तन गरेको रहेछ ।
आफूले चाहेका सुरक्षाकर्मी र मतदान अधिकृतहरुलाई जिल्लामा लैजान चाहने राजनीतिक नेतृत्वहरुको नियत मैले बुझ्न पाएका यी केही उदाहरणमात्र हुन् । सीडीओहरुको सरुवामा पनि यस्तो नियत रहन्छ । सबै सीडीओहरु वा सबै सुरक्षाकर्मीहरु राजनीतिक दलहरुबाट प्रभावित भइहाल्छन् भन्न खोजेको होइन । तर एउटा सत्य के हो भने आफूले भनेको मान्न सक्नेलाई मात्र उनीहरु रुचाउँछन् । मेरो हकमा कसैले पनि यस्तो गर्ने आँट गरेन ।
‘यसो गरिनस् भने तेरो करिअरमा असर पर्ला है’ भन्ने खालका अप्रत्यक्ष धम्कीहरु नपाएको होइन । सुरक्षाकर्मीहरु आफै सचेत र व्यवसायिक भए कसैले पनि दुरुपयोग गर्न सक्दैन भनेर कम्तिमा म चाहिँ भन्न सक्छु । पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलकै इच्छाशक्तिका विषय हुन् । राजनीतिक रुपमा ग्यारेन्टी गर्ने सुरक्षाकर्मीबाट अलिक बढी खतरा हुन्छ ।
निर्वाचन सुरक्षाको दुईवटा पाटो हुन्छन् । एउटा प्राविधिक पाटो जसलाई सेक्युरिटी कन्टेन्ट पनि भनिन्छ । सुरक्षा योजनाहरु बनाउने, सुरक्षा घेराहरु निर्माण गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरु खटाउने काम यसभित्र पर्छन् । हामीसँग भएको जनशक्ति एकैपटक निर्वाचन गराउँदा अपुग छ । २१ हजार मतदान केन्द्रहरुमा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट खटिँदा एउटा मतदान केन्द्रमा ५/६ जनाभन्दा बढी भागमा पर्दैन । कुनै हुलहुज्जत भयो भने थेग्न सक्दैन । साधनस्रोतका हिसाबले भरपर्दो देखिँदैन । विश्वासका हिसाबले मात्र हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
यसपटक केही सकारात्मक पक्षहरु छन् । यसपटक के देखिन्छ भने विगतमा राजनीतिक रुपमा बहिष्कार गर्ने, बाटो तोडफोड गर्ने, हिंसात्मक गतिविधिहरु गर्नेहरुले पनि चुनावमा भाग लिएका छन् । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिहरुबाट धेरै खतरा हुने देखिँदैन । फेरि स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय पहरेदारी पनि बढी हुन्छ । एकले अर्कोलाई चिनेका हुन्छन् । त्यहीँ मतदान र गणना हुने भएकाले स्थानीय पहरेदारी हुन्छ । डर के भने स्थानीयस्तरमा कुनै दलको बलियो पकड छ र अर्को कमजोर छ भने त्यहाँ मोनोपोलीको सम्भावना हुन्छ । मृत्यु भएकाको नाममा भोट हाल्नेदेखि मतदातालाई भोट हाल्नै रोक्नेसम्मका कामहरु हुन सक्छन् । त्यसमा सुरक्षाकर्मी र मतदान अधिकृतहरुलाई प्रभावमा पार्ने त छँदै नै छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई महासंग्राम, महायुद्धका रुपमा घोषणा गरिरहेका छन् । जीवनमरणको सवाल हो पनि भन्छन् । उटपट्याङ अभिव्यक्ति दिन्छन् । द्वैष, आक्रोश, उत्तेजना फैलाउने खालको वातावरण बनाउँछन् । उट्पट्याङ छन् नेताहरु । त्यसमा उच्छृंखल छन् कार्यकर्ताहरु । चुनाव पनि कहीँ जित्नैपर्ने भन्ने हुन्छ र ? त्यसैले यो वैचारिक लडाइँभन्दा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने र जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता देखाइरहेका छन् ।
अघिल्लोपटक हामीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्‍यौं भने सबैभन्दा बढी भष्टाचार हुने ठाउँमा स्थानीय निकाय हो भनेर लेखिएको छ । आकर्षणको केन्द्र बन्यो स्थानीय निकाय । त्यसैले डनहरुदेखि राजनीतिक दलका ठेकेदारहरु घुसिरहेका छन् । उनीहरु घुसेपछि राजनीतिक वातावरण त दूषित हुने नै भयो । अर्को सुरक्षा खतरा उम्मेदवारीका कारण देखिइरहेको छ । अन्य दलबाट भित्रिरहेका नेतालाई उम्मेदवारको टिकट दिने चलन बढ्दो छ ।
हिजोसम्म अर्को दलमा हुँदा वर्ग शत्रु, भ्रष्टाचारी, दलाल भएका मान्छे आज आफ्नो दलमा आउँदा उसले सहजै टिकट पाउन थाल्यो । दल छाड्नेलाई अर्को दलले ठाउँ नदिनेबित्तिकै अर्को खाले राजनीतिक संस्कारको विकास हुने थियो । राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा एक नम्बरमा आफ्ना नातेदार राख्ने भए । दोस्रो नम्बरमा अर्को पार्टीबाट आएकालाई राख्ने भए । तेस्रो नम्बरमा विचार नमिले पनि गठबन्धन गरेर अन्य दलकालाई उम्मेदवार मान्ने भए । यस्तो पोलिटिकल वातावरणमा दलभित्रै विद्रोह हुन्छ र वितण्डा मच्चाउँछन् । सुरक्षा चुनौती त्यहीँनेर हुन्छ । दलभित्र लामो समयदेखि दुःख गरिरहेकाले हाम्रो भाग खाइदियो भन्ने अवस्थामा त्यहाँ द्वन्द्व बढ्न सक्छ । राजनीतिक अभ्यास धुमिलिँदै गयो भने सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै जान्छ ।
राजनीतिक वातावरण दूषित बन्दै जानु परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हुनु हो । ‘हातमा दही जमाएर नबस’, ‘निलो सेना’, ‘रातो सेना’ जस्ता अभिव्यक्तिहरुले राजनीतिक माहोल बिगार्छन् । हामीले निर्वाचनका आचारसंहिताले यस्ता गतिविधिलाई बाँध्न सकेका छैनौं । जथाभावी बोल्ने, पैसा बाँड्ने जस्ता गतिविधिमा रोक नलाग्दा जसले जे पनि गर्न सक्ने हुन्छ । चुनाव भन्ने कुरा मतदाताको मतले जितिने हो । हुँदै नभएका मतदाताका नाममा मत हाल्ने, मत पेटिका फेर्ने, सुरक्षाकर्मी र मतदान अधिकृतहरु मिल्ने एउटा विषय हुन् ।
अर्को त्यत्तिकै डरलाग्दो विषय भनेको मतदातालाई प्रभावित पार्ने पनि हो । उनीहरुलाई भोट हाल्न जानबाट रोक्ने वा आफूले भनेकै ठाउँमा भोट हाल्न लगाउने शक्ति पनि चुनावमा सक्रिय हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले मनी एन्ड मसल दुवै प्रयोग गर्न खोज्छन् । मसलका रुपमा डर–त्रास नै हो । खासमा चुनाव भनेको गुन्डाहरुको लागि दशैँ–तिहारजस्तो समय हो । मतदातालाई छेक्नेदेखि धम्क्याउनसम्म उनीहरु प्रयोग हुन्छन् ।
सेटिङका सुरक्षाकर्मी रहेछन् भने उनीहरुले पक्षधरका गुन्डाहरुलाई केही गर्दैनन् । विपक्षीकालाई लखेटिहाल्छन् । अझ दुर्गम ठाउँ रहेछ र थप सुरक्षाकर्मी आउन समय लाग्ने छ भने मनी एन्ड मसलको ज्यादती झन् चर्को हुन्छ । मतदाताले भयरहित वातावरणमा आफूले चाहेको पार्टीलाई भोट हाल्न पाउनुमात्र नभएर मतदान धाँधलीरहित बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै हुन्छ ।
(भण्डारीसँग नेपाल प्रेसकर्मी लोकेन्द्र प्रसाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रकाशित: २०७९ वैशाख १६ गते ११:२८
न्याय माग्दै गौशाला प्रहरीमा सेन्ट लरेन्सका विद्यार्थी (तस्बिरहरू)
ताप्लेजुङका विमलको मृत्युबारे छानबिन गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्सका विद्यार्थीको प्रदर्शन
सक्कली सुनको नमुना देखाएर इँटा विक्री गर्न खोज्ने गिरोह पक्राउ
रुपन्देहीमा छिमेकीबाट बालिका बलात्कृत